Monitoring Group oo war ka soo saartay weerarrada Ciidamada Kenya u geysten xarumaha shirkada Isgaarsiinta Hormuud - Awdinle Online
Monitoring Group oo war ka soo saartay weerarrada Ciidamada Kenya u geysten xarumaha shirkada Isgaarsiinta Hormuud
November 17, 2019 (Awdinle Online) – UN Monitoring Group ayaa si faahfaahsan kaga hadashay weerarradii loo geystay Xarumaha Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud kadib duqeymo iyo weeraro uga yimid Ciidamada Kenya ee ka tirsan howgalka AMISOM.
Kooxda UN Monitoring Group ayaa soo saara warbixin sanadlaha ee ku saabsan Soomaaliya, iyadoo ay kooxdu warbixinteeda kusoo dartay beegsiga ay Ciidamada Kenya ku hayaan Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiineed ee ugu weyn Soomaaliya.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso warbixinta UN Monitering Group oo dhameystiran:
Bartilmaameedka laga dhiganayo Shaqaalaha iyo Xarumaha Shirkadda.
Guddigan khuburada ah waxay awood u yeesheen in ay si madax banaan u ogaadaan in shan ka mid ah weeraradaas halmar la wada qorsheeyay weliba ay ku jiraan labo weerar oo la qaaday ayadoo lagu shaqeynayo Mandate-ka u dagsan ciidamada Kenya, waxaana ku dhintay labo qof oo rayid ah.
24-kii July 2018 ciidamada Kenya waxay si ku tala gal ah duqeyn ku dileen waardiyihii shirkadda Hormuud iyo qof qaraabadiisa ha xarunta Xiiso-Ugur oo ku taalo hareeraha Ceel Waaq oo ka tirsan gobolka Gedo.
15-kii Janaayo ciidamada xoogga Kenya waxay si ku tala gal ah u burburiyeen xarun Hormuud ku laheyd tuulada Cali Bulaay oo katirsan degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose sidoo kalena waxay jir dileen waardiyihii ama ilaaladii shirkadda Hormuud halkaas u joogay.
Sidoo kale waxaa istaagay shaqadii xawaaladaha iyo lacagihii la isigu diri jiray Mobile-lada oo dadka shacabka ah isticmaali jireen, arrintaas oo sababtay in dhibaato xooggan ay soo gaarto dadka deegaanka tan iyo markii ciidamada Kenya bilaabeen inay xarumaha Hormuud weeraro ku qaadaan oo ay isgaarsiinta jaraan.
Previous articleDhageyso :-Xisbiga Waddani: ‘Xaruntayadii waxaa la dul dhigay ciidamo fara badan’
Next articleXubno Ka Tirsan Xisbiga Wadani Oo La Xiray